Soosaarayaasha Kuleyliyaha kuleylka - Shiinaha Soosaarayaasha Qalabka Kuleylka & Warshadaha
Magaca Badeecada filimka Gaarka ah ee Nooca 16 * 16cm 30 * 16cm 30 * 30cm 44 * 29cm 68 * 30cm 85 * 29.5cm Filinka Alaabada Aluminium / Dahabka Dahabka ah NFF-25 Muujinaya 6 cabbir ayaa loo heli karaa cabbirro kaladuwan oo ah qalabka kuleylka. Filimka aluminium iyo suuf luul ah, waxqabadka xayirnaanta weyn. Jilicsan oo ku habboon in la qaado oo la qaado. Hordhac Filimka milicsiga waxaa laga sameeyay filim aluminium ah iyo suuf luul ah, oo si toos ah ugu hoos dhigaysa galka kuleylka, waxay yareyn kartaa luminta kuleylka. Isku xidhka Tamarta ...
Qalabka kuleylka cusub
Magaca Badeecada Xaraashka kuleylka cusub Nooca 30 * 20cm 12W 30 * 40cm 24W 30 * 60cm 36W 30 * 80cm 48W Qalabka Cad ee PVC Model NR-02 Muuqaalka 4 cabbir ayaa loo heli karaa cabirrada kala duwan ee baqashada taranka. Qaabka dhismeedka, wareejinta kuleylka labbiska ah. Oo lagu qalabeeyay isku-habeynta isbeddelka, waxay kuxiran kartaa heerkulka iyadoo loo eegayo baahida. Waxay leedahay xirmo shaqsiyeed ganaax ah. Hordhac Qalabka kuleylka ah wuxuu ka samaysan yahay PVC, waxaa toos loogu hagaajin karaa heerkulka u dhexeeya 0 iyo 35 ℃. Waxaa lagu dhejin karaa ...
Magaca sheyga kuleylka Xaraashka Midabka 14x15cm 5W 15x28cm 7W 28x28cm 14W 42x28cm 20W 53 * 28cm 28W 28x65cm 35W 80 * 28cm 45W Qalabka Madow ee Kaarboon / Silica gel Model NR-01 Muuqaal 7 cabbir ayaa laga heli karaa cabirro kala duwan oo baqashada tuugada. Qaabka dhismeedka, wareejinta kuleylka labbiska ah. Oo lagu qalabeeyay isku-habeynta isbeddelka, waxay kuxiran kartaa heerkulka iyadoo loo eegayo baahida. Hordhac Qalabka kuleylka ayaa ka samaysan fiber kaarboon iyo silikoon, si toos ah ayaa loogu hagaajin karaa heerkulka ...